लमजुङ आवज साप्ताहिक
बेसीशहरमा अर्को खानेपानी योजनाको काम शुरु, हिउँदमा पनि खानेपानीको अभाव नहुने । पुनर्निर्माणसँगै जुर्मुराएको राइनासकोटको होमस्टे आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा । ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि डाक्टर र औषधी लिएर मध्ये नेपाल नगरपालिकाका मेयर रमेश पाण्डे गाउमा । लमजुङका रंगकर्मीहरु फेरि अर्को नाटक पानी घट्ट लिएर आउँदै ।
पुनर्निर्माणसँगै जुर्मुराएको राइनासकोटको होमस्टे आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा
लमजुङको ऐतिहासिक स्थल राइनासकोटमा सुरु गरिएको होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । भूकम्पले भत्किएका घरको पुनर्निर्माणसँगै सुरु गरिएको होमस्टे यतिबेला आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।
भूकम्पले भत्काएका राइनासकोटका घरमध्ये होमस्टे सञ्चालनका लागि १४ घर आधुनिक तवरबाट बनाइएका छन् । निर्माण भएका मध्ये नौ घरमा होमस्टे सुरु गरिएको छ । ‘होमस्टेका लागि घरहरू तयार भएका छन् । पाउनाका लागि बस्ने खाने राम्रो प्रबन्ध मिलाइएको छ, होमस्टे सञ्चालिका विष्णु गुरुङले भन्नुभयो, यो सुरु भएको प्रचारसँगै पर्यटकहरू आउन थालेका छन् । अमेरिकी नागरिक नतसा बाजनियाकको सहयोगमा घरहरू पुनर्निर्माण गरिएपछि होमस्टे अवधारणा अघि बढाइएको सर्वोदय सेवा आश्रमका अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाले बताउनुभयो । उहाँले राइनासमा भत्किएका घर बनाउनुको साथै विस्थापित हुन लागेको गाउँ जोगाएको बताउनुभयो ।
राइनसकोटकी होमस्टे सञ्चालिका दिलमाया गुरुङ पर्यटकलाई बस्न, खान र दृश्यावलोकनका साथै गाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि देखाउने प्रबन्ध मिलाइएको बताउनु हुन्छ । गाउँ आउने पर्यटकका लागि अर्गानिक खानेकुरा, लोकल कुखुरा, ढिँडो, गुन्द्रुक, कुरिलोलगायतका परिकार खुवाउने प्रबन्ध मिलाइको छ । यस्तै घाँटु, सेर्का, कृष्णचरित्रलगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हेर्न पाइने होमस्टे सञ्चालिका रामप्यारी गुरुङले बताउनुभयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीराम सिग्देलले राइनासकोट होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट सहयोग गरिने बताउनुभयो । राइनासकोटमा होमस्टेसँगै वातावरणमैत्री अवधारणा पनि सुरु भइरहेको छ । वातावरणमैत्री अवधारणा अनुसार गोबरग्यास, धुवाँरहित चुल्हो, फोहोरमैला र पानीको व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको छ । प्रत्येक घरमा सोलार प्यानल जडान गरिँदैछ । प्रत्येक घरहरूमा गाउँले तवरबाट पिंढी, फलैंचा, आकाशेपानीको व्यवस्थापनका लागि ट्याङ्क जडान, सडक बत्ती जडान कार्यसमेत अघि बढाइएको छ । राइनासकोटमा रहेका केही पुराना घरहरू भने पौराणिक महत्व झल्काउन पहिलैकै स्वरूपमा सुरक्षितसँग राखिएको छ । गुरुङ जातिको बस्ती रहेको राइनासकोटमा उनीहरूको कला, संस्कृतिलाई जोगाउन सङ्ग्रहालय समेत स्थापना गरिएको छ ।
०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पको स्मारकसमेत राइनासकोटमा निर्माण गरिएको छ । पुनर्निर्माणपछि बनाइएका संरचनाले पर्यटक भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा लिएको राइनासकोट पर्यटन समितिका अध्यक्ष खड्गबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । राइनासकोट लमजुङ प्रवेशद्वार पाउँदीबाट तीन घण्टाको पैदल यात्रा र दुई घण्टाको सवारी यात्रापछि पुग्न सकिन्छ । यहाँबाट बुद्ध, मनास्लु, अन्नपूर्ण, पिक ट्वान्टी नाइन, गणेश, माछापुच्छ्रे, लमजुङलगायत गरी १८ वटा हिमश्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ ।
एग्रो टुरीजम अवधारणा
राईनासकोटको पुनःनिर्माणसँगै एग्रोटुरीजम अबधारणा पनि सँगसँगै बढ्ने भएको छ । ‘एग्रोटुरीजम अबधारणा अनुसार प्रत्येक घरमा ग्रीन हाउस, कृषि र पशुपालनको पनि शुरुवात हुंदैछ, सर्बोदय सेवाश्रमका अध्यक्ष कृष्णराज ओलीयाले भने,‘ राईनासकोटको तल्लो भागमा अलैंची खेती शुरुवात गरीएको छ, अर्को बर्षबाट राईनासकोटमा चियाखेती समेत गरीने योजना छ ।’
शहर पसेका युवा गाउँ फर्किए
गाउँमा पुनः निर्माणको शुरु हुन थालेपछि गाउँ छाडेर शहर जान खोज्नेहरु पनि गाउँमै रोकिएका छन्, भबिष्य खोज्न गाउँ छाडेर शहर पसेकाहरु पनि धमाधम गाउँ फर्कन थालेका छन्, स्थानीय जितबहादुर गुरुङ भन्नुहुन्छ– ‘पुनःनिर्माणसँगै पर्यटन क्षेत्रबाट गाउँको बिकास गर्न गाउँलेहरु लागेका छन् । गाउँमा नयाँ जागरण आएको छ ।’
पर्यटक भित्र्याउन होमस्टे
गुरुङ जातिको बसोबास रहेको ठाउँ हो, राईनासकोट । यहाँ १४ घरधुरी रहेका छन् । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पले यहाँका धेरै घरमा क्षति पुग्यो । भूकम्पले ढलाएका घर ठड्याउन र चर्किएका भूकम्प प्रभावितका मनमा राहतको मलम लगाउन पुगीन अमेरिकन नागरिक नतसा वाजनियाक ।
उनकै पहलमा राईनासकोटका १४ घर भुकम्प प्रतिरोधी ढंगले पुनः ठडिए । स्थानीय महत्व झल्कने गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाइएको छ । एकतले घर निर्माणमा डेढ करोड बढी लगानी भएको छ । सर्वोदय सेवाआश्रमको योजना अनुरुप नतसाको पहलमा राईनासकोटमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गरिएको हो । गाउँमा रहेको परम्परागत घुमाउने घरको पनि मर्मत गरिएको छ ।
राईनास नगरपालिकाको समृद्धिसँग जोडिएको पक्ष रहेकाले राईनासकोटको विकासका लागि नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाका प्रमुख सिंहबहादुर थापाले बताउनु भयो । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार राईनास नगरपालिका–९ मा रहेको राईनासकाटेबाट १ सय ८० डिग्रीको विन्दुबाट एकै पटकमा बुद्ध, मनास्लु, अन्नपूर्ण, पिक ट्वान्टी नाईन, गणेश, माछापुच्छ्रे लगायत १८ वटा हिमश्रृङ्खला आँखै अगाडि स्पष्ट देख्न सकिन्छ । ‘नेपाल एकीकरणको सुरुको विन्दु र प्राकृतिक रुपमा अलौकिक दृश्यले भरिपूर्ण ठाउँ हो, लमजुङको राईनासकोट’ स्थानीय बासिन्दा एवम् सर्वोदय सेवा आश्रमका अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाले भन्नुभयो । सर्वोदयकै पहलमा विश्वकै पहिलो योग स्तम्भ पनि राईनासकोटमा स्थापना गरिएको छ ।
लमजुङको प्रवेशद्वारा पाउँदीबाट तीनघण्टाको पैदल यात्रा र दुईघण्टाको सवारी यात्रापछि पुग्न सकिन्छ, राईनासकोट । पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना बोकेको ठाउँ भएपनि राईनासकोटमा पर्यटन प्रवद्र्धन हुन नसकेको स्थानिय विष्णुकुमारी गुरुङको गुनासो छ ।
यस अघि राईनासकोटमा पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यहाँसम्म पुग्ने पर्यटकहरुको लागि उचित बासको व्यवस्था हुन सकेको थिएन, ठाउँको प्रचारप्रसार पनि हुन सकेको थिएन, राज्यले पनि खासै पहल गरेन, जसका कारण यो ठाउँ ओझेलमा प¥यो, तर अब त्यो स्थिति छैन, राइनासकोटले काँचुली फेरेको छ ।
लमजुङका घलेगाउँ, गाउँशहर काउलेपानी झै अब राइनासकोटले पनि होमस्टेमा छलाङ मार्ने जमर्को गरेको छ । धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको राइनासकोट नेपालकै उत्कृष्ट गन्तब्य बनाउन सकिने सर्वोदयका अध्यक्ष ओलियको ठम्माइ छ ।
Posted by Lamjung Aawaz at 10:53 AM No comments:
त्रिवेणी कप फुटबलको उपाधि बेसीशहर युथ सोसाइटीलाई
लमजुङमा गत पुस १२ गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश नम्बर ४ कै प्रतिष्ठित तथा लमजुङको सर्वाधिक पुरस्कार राशीको त्रिवेणी कप राष्ट्रब्यापी फुटबल प्रतियोगिता २०७४ को उपाधि बेसीशहर युथ सोसाइटीले जितेको छ ।
बुधबार सीशहरस्थित सहजी रंगशालामा भएको अत्यन्त रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा आयोजक त्रिवेणी युवा क्लवलाई हराउँदै सोसाइटीले उपाधि चुमेको हो ।
निर्धारित समयमा दुवै पक्षबाट गोल हुन नसकेपछि ट्राइबेकरबाट हारजीत भएको हो । निर्धारित समयमा दुवै पक्षले गोल गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएपछि थपिएको अतिरिक्त समयमा पनि दुवै पक्षले गोल गर्न नसकेपछि खेल ट्राइबेरका गएको हो । बेसीशहरको सहजी रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा आयोजक त्रिवेणी युवाक्लबलाई ट्राइबेकरमा ३–२ गोल अन्तरले पराजित गर्यो ।
उपाधिसंगै बेसीशहर युथ सोसाइटीले त्रिवेणी कप, नगद ३ लाख रुपैँया, स्वर्णपदक र प्रमाणपत्र पाएको छ । यस्तै उपविजेजा त्रिवेणी युवाक्लबले नगद १ लाख ५० हजार रुपियाँ, रजतपदक र प्रमाणपत्रमा चित्त बुझाएको छ ।
विजेता टिमलाई जिल्ला न्यायधिश कोमलप्रसाद आचार्य र आयोजक त्रिवेणी युवाक्लबका अध्यक्ष छविन्द्र गुरुङले संयुक्त रुपमा पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतियोगितामा सार्वेकृष्ट खेलाडी त्रिवेणीका गोलरक्षक आकाश रानाभाट घोषित भए । विजेता बेसीशहर युथ सोसाइटीका गोलरक्षक विमल थापाले उत्कृष्ट गोलरक्षकको उपाधी पाए भने अनुसासित टिमको उपाधी अन्नपूर्ण युवाक्लब नाल्माले पायो ।
खेल अबधीभर सर्वाधिक गोल गरि सुन्दरबजार रातोका इन्द्र दुरा, सामाना युवाक्लब तनहुँ, रड्स फुटबल क्लब चितवनका सावी गुरुङले नगद पुरस्कार र मेडल जिते । सर्वोकृष्ट खेलाडीलाई १५ हजार, अनुसाशित टिमलाई १० हजार र सर्वाधिक गोलकर्तालाई ५÷५ हजार नगद पुरस्कार दिइएको थियो ।
सेमिफाइनल विजेता सुन्दरबजार युवाक्लब र घरपोखरा युवाक्लबले नगद ५०÷५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।
गत पुस १२ बाट शुरु भएको प्रतियोगितामा विभिन्न जिल्लाका २३ टिमले सहभागिता जनाएका थिए ।
Posted by Lamjung Aawaz at 10:52 AM No comments:
लमजुङका दुई जना पत्रकार पुरस्कृत
लमजुङका दुई जना पत्रकार पुरस्कृत भएका छन् । काठमाण्डौंमा पत्रकार प्रेमकुमारी घले र बेसीशहरमा पत्रकार कृष्णप्रसाद अधिकारी पुरस्कृत हुनु भएको हो । अधिकारीलाई आइतबार बेसीशहरमा पुरस्कृत गरिएको हो भने घले तमु तमु सञ्चारकर्मी संघ (एटजोन)ले घलेलाई काठमाण्डौंमा पुरस्कृत गरेको हो ।
मानवअधिकार र पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारीले तेजबहादुर भण्डारी स्मृति खोज पत्रकारिता पुरस्कार पाउनु भएको हो । पुरस्कारको राशी नगद ५ हजार र कदरपत्र रहेको छ । त्यस्तै महिला खबर अनलाइनका पूर्व सम्पादक तथा रेडियो मस्र्याङदीका पूर्व स्टेशन म्यानेजर घले सुश्री भद्राकुमारी घले पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु भएको हो । पुरस्कारको राशी नगद १० हजार र ताम्रपत्र रहेको छ ।
तमू(गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघले घलेलाई सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय रहि तमू समूदायको समृद्धिका लागि पु¥याएको योगदानको कदर गर्दौ पुरस्कृत गरेको हो । घले सञ्चारिका समूहको महिला खबर डटकमको फिचर संयोजक तथा पूर्व सम्पादक हुन् । विगत १३ बर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशिल घले यसअघि कान्तिपुर दैनिकका लमजुङ संवाददाताको रुपमा समेत कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै झण्डै दुई दशकदेखि पत्रकारिता र मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारीले द्वन्द्धकालीन अवस्थामा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो । अधिकारीले माओवादी द्वन्द्धका क्रममा लमजुङ जिल्लामा भएका प्रायः सबै घटनाक्रमलाई समेटेर द्वन्द्ध पाश्र्वचित्रमा लमजुङ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ । पुस्तकमा द्वन्द्धका क्रममा भएका प्रायः सबै घटनाहरु समेटिएका छन् ।
आइतबार बेसीशहरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अधिकारीलाई नेपाल मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मोहना अन्सारी, लमजुङ प्रदेश क बाट प्रदेश सभामा विजयी उमेदवार धनञ्जय दवाडीले नगद पुरस्कार र कदरपत्रले सम्मानित गर्नुभयो ।
पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि अन्सारीले द्वन्द्धका क्रममा अधिकारीले पु¥याउनु भएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । उहा“ले द्वन्द्धका क्रममा सबै भन्दा बढी पीडित महिला र बालबालिका भए पनि यो विषय उठान हुन नसकेको भन्दै दुःख प्रकट गर्नुभयो । द्वन्द्धपीडितका लागि राम्रो काम हुन नसकेको भन्दै अन्सारीले राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रले द्वन्द्धपीडितहरुप्रति समान ब्यवहार हुन नसकेको दुखेसो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का विजयी उमेदवार धनञ्जय दवाडीले पुरस्कृत ब्यक्तित्व अधिकारीले द्वन्द्धका क्रममा निडर भइ मानवअधिकारको पक्षमा निरन्तर कलम चलाइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य मोहनहरि पौडेल, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे, बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनाली लगायतका वक्ताहरुले मन्तब्य राख्नु भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र सामाजिक न्याय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्ष महासंघ लमजुङका अध्यक्ष आश गुरुङको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
Posted by Lamjung Aawaz at 10:50 AM No comments:
अर्को खानेपानी योजनाको काम शुरु,बेसीशहरमा अबको बीस बर्ष खानेपानीको समस्या नुहने
खानेपानी आयोजनाको सिलान्यास गर्दै मेयर अर्याल र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार प्रधान
बेसीशहर पुस बेसीशहरमा अबको बीस बर्ष खानेपानीको समस्या नुहने गरी अर्को खानेपानी योजनाको काम शुरु गरिएको छ । बेसीशहर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले भाचेक खोलाबाट पानी ल्याएर बेसीशहरको पानीको माग पूर्ति गर्न लागेको हो । हालको खानोपनी अपुग भएपछि समितिले भाचोक खोलाको पानी ल्याएर अबको बीस बर्षसम्मका लागि खानेपानीको आपूर्ति थेग्ने गरी योजना शुरु गरेको हो । नेपाल सरकारको सहयोगमा समितिले २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना शुरु गरेको छ । बेसीशहर सहलगानी खानेपानी आयोजना अबको डेढ बर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार प्रधानले बताउनुभयो ।
आयोजनाको कूल लागतमध्ये सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकम समितिले आफ्नो लगानी गर्नेछ । यसका लागि समितिले उपभोक्ताहरुसंग सहयोग संकलन शुरु गरेको छ । आयोजनाका लागि लगानी जुटाउनका लागि समितिले उपभोक्ताहरुलाई किस्ताबन्दीमा रकम जम्मा गरिदिन आग्रह गरेको थियो । केही बर्षपछि बंैकले दिने ब्याजदर सहित उपभोक्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी समितिले योजना बनाएको थियो । खानेपानीको खपतका आधारमा उपभोक्ताहरुलाई बर्गिकरण गरी समितिले सोही अनुसार सहयोग संकलन गरेकोमा अधिकांश उपभोक्ताले रकम समितिमा जम्मा गरिदिएका छन् ।
सो रकम खानेपानीको शुल्कमा समेत समायोजन गर्न सकिने गरी समितिले योजना बनाएको थियो । हाल खानेपानीको अभाव बेला बेलामा सिर्जना हुने गरेकोमा यसका समाधानका लागि समितिले अर्को आयोजना थप गरी नगरबासीलाई सहज ढंगले खानेपानी उपलब्ध गराउन शुरु गरेको प्रयासलाई सकरात्मक रुपमा लिइएको छ ।
यो आयोजनाबाट बेसीशहर बासीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन शुद्धिकरणका बिधिहरु पनि अपनाइने छन् । समितिका अनुसार प्लेन सेडिमेन्टेशन, रफिनिङ फिल्टर, स्लोस्याण्ड फिल्टर, क्लोरेशन च्याम्बर आदि निर्माण गरिने छन् । भाचोक खोलाको पानीलाई बाँझाखेत र बेसीशहरमा गरी ५ सय घनमिटरका छुट्टाछुट्टै दुईवटा ट्यांकी निर्माण गरिने छन् ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात बेसीशहरमा हिउँदमा पनि खानेपानीको अभाव नहुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रधानले बताउनुभयो ।
आयोजनाको बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्यालले बुधवार शिलन्यास गर्नु भएको छ । यद्यपी महादेव खिम्ति पराजुली जेभीले ठेक्का लिएको सो आयोजनाको निर्माण कार्य यस अघि नै शुरु भैसकेको थियो । बाँझाखेतको देउजनथोक गाउँ नजिकै आयोजनाको काम भइरहेको छ । शिलन्यास कार्यक्रममा बोल्दै मेयर अर्यालले खानेपानी आयोजनाको लागत स्टेमेट अनुसार समयसिमाभित्र सक्न र गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर जगरनाथ दासले खानेपानी आयोजनाको लागत स्टेमेट र निर्माण गरिने संरचनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
Posted by Lamjung Aawaz at 10:44 AM No comments:
लमजुङ पुस २०
Posted by Lamjung Aawaz at 5:37 PM No comments:
ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि डाक्टर र औषधी लिएर मेयर पाण्डे गाउमा
मध्यनेपाल नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य उपचार गराएको छ ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा आइ उपचार गराउन नसक्ने ६० बर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई नगरपालिकाले घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरी उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधीसमेत निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको हो ।
यस क्रममा नगरपालिकाका वडा नं. ९ बांग्रे, वडा नं. ७ को चिसंकु, वडा नं. ५ को पराजुलीबेसी, वडा नं. ८ को डडुवा, वडा नंं १० हाँडीखोलामा यो अभियान सम्पन्न भएको छ । मध्य नेपाल नगरपालिकाका मेयर रमेश कुमार पाण्डे सहित प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र राज पौडेलसहित चिकित्सकहरुको टोलीले विभिन्न वडामा पुगी वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हो । यस कार्यका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका ७ जना डाक्टरहरुको टोली मध्यनेपालमा आएको मेयर रमेशकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरुमा दम, निमोनिया, बाथ, रक्तचाप लगायतका समस्या बढी देखिएको पाइएको छ । चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य परीक्षणपछि आवश्यक औषधीका साथमा उनीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह दिने गरेका छन् । जाडोको समयमा दम बढ्ने समस्याले बढी सताउने भएकाले यसबाट बच्न सकिने उपायका बारेमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सल्लाह समेत दिइएको छ । साथै जटील अवस्थाका विरामीलाई अस्पतालमा गई उपचार गराउन समेत सल्लाह दिइएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेले आफू निर्वाचित भएर आएपछि जनताको सुख दुःखमा साथ दिने अभियान अन्तर्गत हरेक ६÷६ महिनामा प्रत्येक वडाहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरु आर्थिक अभावले उपचार गराउन नपाएका, कतिपयको छोरा बुहारी घरमा नभएर उपचार नपाएका र कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरु अन्य विविध कारणले उपचार नपाएको अवस्था देखिएको मेयर पाण्डेले बताउनुभयो । उहा“ले स्वास्थ्य सेवा पाउनु ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकार रहेको र उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइ आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु नगरपालिका र आफ्नो कर्तब्य सम्झेर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मेयर पाण्डेले नगरपालिकाको वडा नं. १० हा“डीखोलामा सिटामोलसमेत नभएर ज्येष्ठ नागरिकहरु सामान्य रोगबाट समेत ग्रस्त हुनुपरेको भेटिएको अनुभव सुनाउनुभयो । औषधी लिएर डाक्टरहरुको साथमा नगरपालिकाका मेयर तथा कार्यकारी अधिकृत र वडाअध्यक्षहरु पुग्दा ज्येष्ठ नागरिकहरु औधी खुशी भएको र यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको पाण्डेको भनाई छ ।
“म जनताको सेवा गर्न आएको हू“ त्यसैले सकेसम्म सेवा दिन्छु । सबैको सहयोग लिएर विकास निर्माणका काम देखि सामाजिक सेवा गर्ने प्रण लिएको छु ।” पाण्डेले भन्नुभयो ।
हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरु उपेक्षित छन् । युवाहरु गाउ“मा कम छन् । महिलाहरु गृहस्थीमै बढी तल्लीन हु“दा ज्येष्ठ नागरिकहरुले पर्यप्त स्याहार पाउन सकेका हु“दैनन् । त्यसमाथि पनि विरामी अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्था झनै कष्टकर हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएको मेयर पाण्डेले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकहरुको सेवाबाट आफूलाई थप सन्तुष्टि मिलेको उहा“ले बताउनुभयो ।
भोर्लेटार पुस १८
२०७० चैत २५ गतेको लमजुंग आवाज pdf मा पढ्नुहोस
Posted by Lamjung Aawaz at 11:47 AM No comments:
२०७० चैत्र १८ गते को लमजुंग आवाज pdf मा
Posted by Lamjung Aawaz at 7:19 PM No comments:
२०७० चैत ११ गतेको लमजुंग आवाज साप्ताहिक pdf मा
Posted by Lamjung Aawaz at 4:01 PM No comments:
२०७०-१२-४ गतेको लमजुंग आवाज पत्रिका PDF मा पढ्नुस्
Posted by Lamjung Aawaz at 3:50 PM No comments:
ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय राइनासकोट जाऔं
सूर्योदयको दृष्यवलोकन गरी रमाऔं
धार्मिक पर्यटन केन्द्र
एकपटक गएर नुहाउनुपर्ने ठाउ
तातोपानी कुण्ड - बाहुनडाडा
संस्कृतिमा उत्तिकै धनी छ लमजुङ
गुरुङ समुदायको घाटु नाच
पुरखाहरुको वीरताको चिनो
ऐतिहासिक राइनासकोट गढी
आउनुहोस् है लमजुङ
ऐतिहासिक लमजुङ दरबार
लमजुङ चिनाउने अर्को हिमाल
पहिले प्रकाशित लेखहरु
पहिले प्रकाशित लेखहरु January (6) April (2) March (3) February (5) January (4) December (24) November (32) October (14) September (40) August (50) July (11) January (6) February (5) January (3) September (8) August (1) July (3) June (16) April (13) March (37) February (16) January (25) December (17) September (1) August (14) July (13) June (9) April (9) March (12) February (11) January (19) December (9) November (28) September (21) August (23) July (18) June (9) May (4) April (12) March (28) February (9) January (18) December (19) November (12) October (17) September (19) August (15) July (13) June (1) May (22) April (23) March (20) February (12)
तपाईंको Visiting नम्बर
रेडियो तथा टेलिभिजनहरु
नेपाल टेलिभिजन समाचार
नेपाल टि भी यु्के
मनोरन्जनको दुनियाँ (नेपाली)
कमेडी टि भि प्रोग्रामहरु
सबै MP3 गीत हरु
अन्य MP3 र भिडियो गीत हरु